နို့တိုက်မေမေ ငရုတ်သီးစားရင် ဘာဖြစ်မလဲ.... - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ » နို့တိုက်မေမေ ငရုတ်သီးစားရင် ဘာဖြစ်မလဲ….
အစပ်မပါရင်မစားတတ်ဘူးဆိုပေမယ့် ဘေဘီလေးကို နို့တိုက်နေရချိန်မှာတော့ မေမေ့အနေနဲ့ အစပ်မစားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ နည်းနည်းစားရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး အစပ်စားမယ်လို့ စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ကြည့်ပါလို့ ပြောပါရစေလား။ နို့တိုက်မေမေ အနေနဲ့ အစပ်မစားတာက မေမေ့အတွက်ရော ဘေဘီလေးအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေမှာပါ။
ငရုတ်သီးမှုန့် စတာတွေ အားလုံးက နို့တိုက်မေမေတိုင်း ရှောင်သင့်တဲ့ အရာတွေပါ။
ဒါဆိုရင် နို့တိုက်နေရတဲ့ မေမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ အစပ်ကို လုံးဝမစားရတာလားဆိုတော့ ရှောင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းလောက်ကတော့ ရပါတယ်။ အများကြီးစားမိရင်တော့ မိခင်နို့ကနေတဆင့် ဘေဘီလေးဆီရောက်သွားနိုင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် နို့တိုက်နေရချိန်မှာ အစပ်ကိုရှောင်စားတာက အကောင်းဆုံးပါ။ မရှောင်နိုင်ရင်တောင် နည်းနည်းလောက်ပဲစားပါ။
နို့တိုက်မေမေ အစပ်စားတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ…………
နို့တိုက်နေရချိန်မှာ မေမေက အစပ်ကိုစားမိမယ်ဆိုရင် စားတဲ့ပမာဏက များလေလေ ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်နိုင်ခြေများလေလေပါ။
မိခင်ရဲ့ စားသောက်မှုက နို့ရည်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကလေးက မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းကိုပဲသောက်နေချိန်မှာ မေမေက အစားရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မေမေက အစပ်စားလိုက်မိမယ်ဆိုရင် ဘေဘီလေးက နို့သောက်ပြီးချိန်မှာ ငရုတ်သီးရဲ့ သက်ရောက်မှုကြောင့် မအီမသာဖြစ်ပြီး ဂျီကျတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
လူကြီးတွေတောင် အစပ်စားတာများရင် ဗိုက်ထဲမှာ မအီမလည်ဖြစ်တတ်ကြသေးတာ နုနယ်လွန်းတဲ့ ဘေဘီလေးကတော့ ပြောနေစရာတောင်မလိုအောင်ပါ။ မေမေ့ အစပ်မရှောင်နိုင်ဘဲ စားမယ်ဆိုရင် ဘေဘီလေးက လေနာဝေဒနာကို ခံစားရနိုင်ခြေ တော်တော်လေးများသွားပါလိမ့်မယ်။ အစပ်တွေ များများစားလေလေ ဘေဘီလေး လေနာဖြစ်နိုင်ခြေများလေလေပါ။
ဘေဘီလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်က အပူအစပ်တွေကို အသက် ၄ နှစ်လောက်အထိ ခံနိုင်ရည်မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးအရွယ်မှာ မေမေက အစပ်တွေစားလို့ နို့ရည်ကနေတဆင့် ဘေဘီလေးဆီကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင် ဘေဘီလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်က ဟန်ချက်ပျက်ပြီး လေထိုးလေအောင့်ဖြစ်တာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးက အစပ်ကြောင့် အစာမကြေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးက အလိုမကျဖြစ်ပြိး မအီမသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မေမေအစပ်စားမိထားလား ပြန်ဆန်းစစ်ပါတော့။ သေးစိုနေတာမျိုး၊ အခြားအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုမရှိဘဲ ဘေဘီလေးက မအီမသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အစပ်စားထားတာကြောင့်ပါ။
ဘေဘီလေးက နို့တွေပြန်အန်မယ်၊။ အစာမကြေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒါက မေမေ အစပ်စားမိတာကြောင့်ဖြစ်ပါမယ်။
ဘေဘီလေးတွေက ဝမ်းခဏခဏသွားတာ ပုံမှန်ပဲဆိုပေမယ့် ဝမ်းက အချွဲတွေပါနေမယ်။ အစိမ်းရောင်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သေချာတာက ဘေဘီလေးရဲ့ မေမေ အစပ်စားမိလိုက်တာပါ။
အချို့ဘေဘီလေးတွေမှာဆိုရင် မေမေက အစပ်စားမိတာကြောင့် အသားအရေမှာ အဖုအပိမ့်တွေထွက်တာ၊ ခဏခဏလန့်နိုးတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် မေမေရော ဘေဘီလေးပါ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် နို့တိုက်နေရချိန်မှာ အစပ်မစားပါနဲ့။
Does Spicy Food Affect Breast Milk? https://parenting.firstcry.com/articles/is-it-safe-to-eat-spicy-food-during-breastfeeding/ Accessed Date 23 January 2020
Is It Safe To Eat Spicy Food While Breastfeeding? https://www.momjunction.com/articles/safe-eat-spicy-food-breastfeeding_006562/#gref Accessed Date 23 January 2020
Is it okay to eat spicy food while nursing? https://www.babycenter.com/404_is-it-okay-to-eat-spicy-food-while-nursing_1931.bc Accessed Date 23 January 2020
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ နို့ဆက်တိုက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား……….